Rasmi: Filimka Badla iyo ganacsiga adag uu sameeyay todobaadkiisa labaad – Filimside.net
Rasmi: Filimka Badla iyo ganacsiga adag uu sameeyay todobaadkiisa labaad
Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu iyo Amrita Singh filimkooda Badla ayaa siweyn u gadmay todobaadkiisa labaad wuxuuna keenay 28 Crore (Trade Figure) wuxuuna noqday filimka sedexaad ee sanadkan todobaadkiisa labaad ganacsiga ugu badan sameeyo kaliya Uri iyo Total Dhamaal ayaa ka ganacsi badan todobaadka labaad.
Filimka Badla oo HIT ah wuxuu mudo labo todobaad kusoo xareeyay 66 Crore (Trade Figure) wuxuuna sameeyay kaliya 25% hoos u dhac todobaadkiisa labaad waxaana la wada eegi doonaa Jimcadiisa sedexaad sida uu u gadmo ayaa laga cabir qaadan karaa halka uu ku hakan doono mashruucaan reer magaalka ka wada heleen.
Fadlan hoos kaga bogo mudo labo todobaad ah ganacsiga uu sameeyay Badla soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 65.79 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale filimka Hollywood-ka ee Super Hero-ga ah Captain Marvel ayaa si adag isku celiyay todobaadkiisa labaad wuxuuna keenay 21.50 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan mudo labo todobaad ah wadarta guud inuu soo xareeyay 78 Crore (Trade Figure).
Captain Marvel waa filim gudaha Hindiya HIT ka noqday sidoo kalena wuxuu ka mid noqday 10-ka filim Hollywood sameeyeen kuwooda lacagaha ugu badan gudaha Hindiya kasoo xareeyeen. Fadlan hoos kaga bogo ganacsiga uu Captain Marvel ilaa haatan sameeyay soona daabacday BOI:
Wadarta Guud – 76.52 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 246